Himalaya Dainik » के शुक्र ग्रहमा कुनै जीव हुनसक्छ ?
शुक्र ग्रहको बादलमा कुनै जीवको अस्तित्व छ कि भन्ने अद्भुत सम्भावनाबारे अहिले वैज्ञानिक चर्चा सुरु भएको छ। त्यहाँको वायुमण्डलमा एउटा ग्यास भेटिएपछि खगोलशास्त्रीहरू त्यो कसरी बन्यो भनेर जान्न प्रयास गर्दैछन्।
त्यो ग्यास फस्फीन हो जुन फस्फरसको एउटा परमाणु र हाइड्रोजनका तीनवटा परमाणु मिलेर बन्छ। पृथ्वीमा पेन्ग्विनको पेटमा वा कम अक्सिजन हुने धापमा बस्ने सूक्ष्मजीवले फस्फीन बनाउँछन्।
हाइड्रोजन र फस्फरसका परमाणु मिलेर फस्फीन ग्यास बन्छ “मेरो शोधजीवनभरि म यो ब्रह्माण्डमा अन्यत्र पनि जीवन छ कि भनेर खोज्न इच्छुक रहेँ। त्यसैले यो कुराको सम्भावनाले मात्रै पनि म चकित छु,” प्राध्यापक ग्रीभ्सले भने।
अर्बौँ वर्षअघि भएको एउटा अद्भुत घटनामा आठवटा सूर्यको ऊर्जा एकैचोटि निस्कियो ! यसको वायुमण्डलमा ९६ प्रतिशत कार्बन डाईअक्साईड छ जसको ग्रीनहाउस असरले त्यहाँको जमिनको तापक्रम भट्टीमा जस्तो ४०० डिग्री सेल्सीअसभन्दा माथि हुन्छ।
त्यहाँको बादल बाक्लो र ७५ देखि ९५ प्रतिशत सल्फ्युरिक ए सिडले बनेको छ जुन पृथ्वीमा पाइने जस्तो जीवको कोषका लागि वि नाशकारी वि ष हो।
अमेरिकी जीववैज्ञानिक डा. विलियम बेन्स पनि यो अध्यनमा सहभागी भएका थिए। उनले त्यो ग्यास त्यहाँ ज्वा लामुखी फुट्दा वा बिजुली चम्किँदा उत्पादन भएको हो कि भनेर अध्ययन गरे।
त्यहाँको मात्रामा रहेको सल्फ्युरिक ए सिडबाट कुनै जीवित कोषलाई जोगिन कि जीवरासायनिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन भएको हुनुपर्छ कि अन्य कुनै ढाल सिर्जना भएको हुनुपर्छ।
ग्रीभ्सको टोलीले शुक्र ग्रहमा जीव पत्ता लागेको दाबी गरेको छैन। शुक्र ग्रहको सतहमा पुगेका सोभियत प्रोबहरू केही चित्र पठाएपछि नष्ट भएका थिए उनीहरूले खालि यस विषयमा सम्भावनाबारे विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
“यो साँच्चिकै उत्सुकताको कुरो हो र त्यो ग्यास त्यहाँ नभएकै भए पनि यसले नयाँ तथ्यहरू पत्ता लगाउनेछ,” उनले भने।
चिलेस्थित अल्मा टेलिस्कोपले शुक्र ग्रहमा फस्फीन ग्यास भएको पत्ता लगाएको थियो
यस विषयमा थप जानकारी पत्ता लगाउन शुक्रको वायुमण्डल अध्ययन गर्ने अन्वेषण नै पठाउनुपर्छ। नासाले हालै वैज्ञानिकहरूलाई सन् २०३० को दशकमा सम्भावित अन्वेषण गर्न योजनाको प्रारूप तयार पार्न भनेको छ।
“सन् १९८५ मा रुसले भेगा बलूनबाट यस्तो गरेको थियो,” टोलीमा रहेकी प्राध्यापक सारा सिगरले भनिन्।
“बलूनलाई सल्फ्युरिक एसिडबाट बचाउन टेफ्लनले छोपिएको थियो र त्यो केही दिन त्यहाँको आकाशमा रहेको थियो।”